Mapadhi akanakisa embwa: zvaari uye maitiro ekushandisa imbwa yako | Imbwa dzeNyika
Mapedhi embwa ane maviri makuru mabasa (anonyanya kushandiswa kuita pee kana kuputika) uye anobatsira panosvika nguva iyo imbwa yedu yakura zvikuru, ichangobva kuvhiyiwa uye zvikurukuru kana iri imbwanana inofanira kudzidza kuita zvinhu zvayo.
Munyaya ino tichataura nezvayo iwo akanakisa underpads embwa uye isu tichakudzidzisawo mashandisirwo awo, tichatsanangura mabasa ayo akasiyana uye kunyange izvo zvavari kuitira kuti iwe uzive zvakadzama kuti inoshanda sei uye zvakanakira uye zvakaipira zvechigadzirwa ichi. Tinewo chinyorwa chine chekuita ne manapukeni akanakisa izvo zvinogona kubatsira kwauri.
Edipets, Underpads ye...
RCruning-EU Zvipfeko ...
Nobility - 100 x ...
OUT! Enda Pano Pads...
1 Iyo yakanakisa underpad yembwa
1.1 Paki ye60 yakawedzera yakakura underpads
1.2 ultra absorbent wipes
1.3 Underpads ane adhesive strips
1.4 100 pads 60 x 60
1.5 Mapadhi embwa yemarasha
1.6 Mapadhi epasi anotora anenge 1,5 l
1.7 reusable underpads
2 Chii chinonzi mapedhi embwa?
3 Mapepa epasi anofanira kushandiswa riini?
4 Ndepapi pari nani kuisa underpad?
5 Maitiro ekudzidzisa mwana wako kushandisa underpad
6 kupi kutenga mapepa embwa
Iyo yakanakisa underpad yembwa
Paki ye60 yakawedzera yakakura underpads
Aya maAmazon Basics Training Wipes ane mutengo uye mhando yakaoma kurova. Ivo vanouya mumapakeji ane huwandu hwakasiyana (50, 60, 100 uye 150), vane mashanu akaturikidzana ekunyudza anotokwezva zvinwiwa kudzivirira kusvibisa pasi zvakanyanya sezvinobvira uye pamusoro pazvo vanoshandura mvura kuita gel kana yangodaro. inopfuura mukati. Ivo zvakare vanotora kunhuwa uye vane hukuru hwakakura, sezvo vachiyera 71 x 86 masendimita, uye vanogona kupedza maawa mashoma vakanyorova (vangani vanozoenderana nehuwandu hwepee inoburitswa imbwa yako). Dzimwe tsinhiro, zvisinei, dzinoratidzira kuti hadzigari kwenguva refu sezvadzinofanira uye kuti dzinorasikirwa nokukurumidza.
ultra absorbent wipes
Nobility - 50 x ...
Imwe sarudzo yemhando yepamusoro uye nemapakeji e30, 40, 50 uye zana pads (akaputirwa mumapaketi madiki egumi uye wozoiswa pamwechete mupasuru hombe). Izvi zvinobva kurudzi rweNobleza zvinosanganisira zvishanu zvinonyudza maseru uye chigadziko chisina kutsvedza kudzivirira kutyisa zvakanyanya sezvinobvira. Muchokwadi, iwe unogona kuzvitakura mutakuri kana mumotokari. Vanotora kusvika kumakapu mana emvura uye, semamwe mamodheru, vanoshandura pee kuita gel kuti irege kudonha nyore.
Underpads ane adhesive strips
Kana zvaunoda zviri mapadhi embwa dzisingafambisi millimeter, iyi sarudzo kubva kuArquivet, inozivikanwa mhando munyika yemhuka dzinovaraidza, ichaita zvikuru.. Mukuwedzera, inosvuura zvakanaka uye haisiyi mavanga pasi. Inouya mumapakiti e15 uye anosvika zana mayunitsi, uye inowanikwawo muhukuru hwakasiyana. Sezvatareva, ine mamwe machira ekunamira padivi zvekuti inonamira pasi uye isingafambi. Kunyange zvazvo vasingatsananguri kuti vanotora zvakawanda zvakadii, vamwe vanotaura kuti inoita basa rayo nemazvo.
100 pads 60 x 60
FEANDREA 100 Mapedhi...
Vanoti mhando yeFeandrea yakabva kumakiti maviri akatorwa nemhando iyi, Fe naRea, uye kuti yakawedzerwa mushure mekutora muti wekati muna 2018. Chero zvazvingava, iyi brand pack ye100 pads inoshandawo kumbwa. Inonyanya kunyura, kutaura zvazviri, vanoti 45 g yekupukuta inorema 677 g mushure mekuwedzera girazi remvura kuitira kuti iwe uone kugona kwayo kukuru. Dzine zvakare mitsara mishanu, inotora hwema, uye ine gasi rekudzivirira mvura.
Mapadhi embwa yemarasha
Chii chinosiyanisa idzi imbwa pads, zvakare kubva kuAmazon Basics, ndechekuti ivo vakagadzirwa nemarasha mhinduro yekudzora kunhuhwirira kuri nani. Muchokwadi, mamwe anotevera fomura imwechete seyakasara yezvigadzirwa mukirasi ino: zvidimbu zvishanu zvekutora, yekupedzisira isingapinde mvura kudzivirira kutyisa uye kubuda, uye inooma nekukurumidza. Marasha emarasha anouya muhukuru huviri, akajairika (55,8 x 55,8 cm) uye akawedzera hombe (71,1 x 86,3 cm).
Mapadhi epasi anotora anenge 1,5 l
Kune avo vari kutsvaga mapedhi anotora mvura yakawanda sezvinobvira, iyi sarudzo inonakidza kwazvo. Inotora kusvika marita 1,4 emvura muzvikamu zvayo zvitanhatu, iyo yekupedzisira isingapindi mvura. Pamusoro pezvo, iyo underpad inoshanduka kuita bhuruu kana ichida kuchinjwa, ichibatsira imbwa kuti iswedere pedyo nekudyidzana nayo uye kuderedza kunhuhwirira kusingafadzi. Vanogona kugara pasina kuchinja zuva rose, izvo zvakanakira imbwa hombe idzodzo.
Pecute Underpads Imbwa...
Uye kune ecologist yakawanda, tinopa ichi chinonakidza chigadzirwa (pakeji yega yega ine maviri): reusable underpad. Ndiyo hombe yemapedhi embwa yatakaona (inoyera 90 x 70 cm) uye inoumbwa nezvikamu zvishanu zvinodzivirira pee kubva pakusvibisa pasi. Mukuwedzera, sezvatakataura, iyo inoshandiswa zvakare, saka unogona kuiisa mumushini wekugeza pasina dambudziko uye uishandise kakawanda. Hongu, mamwe mashoko anochema-chema kuti haatore sezvaanovimbisa uye kana wawacha munhuwi wemboro haupedzi nguva dzose.
Chii chinonzi mapedhi embwa?
Mapedhi epasi anowanzo kuve nemhando yegumbeze rakagadzirwa nechinhu chakafanana neiya yemanapukeni nemapadhi, kureva, ine divi rinonwisa pamusoro uye divi risingapinde mvura pasi. Basa rayo ndere, kunyanya, kuunganidza pee kubva kune imbwa idzo, nechikonzero chimwe kana chimwe, haigone kubuda kunze kuti isunungure. kana kuti havazivi kuti sei nokuti vachiri vadiki.
Mapepa epasi anofanira kushandiswa riini?
heyi nguva dzakasiyana muhupenyu hwembwa maungango shandisa mapedhi:
Chikonzero chinowanzoitika chekushandisa chishandiso ichi chiri mukati imbwa dzakanyanya kudiki, dzisati dzaziva nzira yekuenda kuchimbuzi.
Pane zvinopesana, imbwa dzakwegura zvikuru, dzinogona kutambura nekusazvidzora, vangadawo mapedhi.
Saizvozvowo, kana imbwa yako yakatambura kuvhiyiwa nguva pfupi yadarika, ungadawo rubatsiro kuti uende kuchimbuzi.
Pakupedzisira, mapadhi anewo basa re kuunganidza kurasikirwa kubva kuvakadzi vanogona kunge vari mukupisa.
Ndepapi pari nani kuisa underpad?
Unogona sei kufungidzira soaker hapana kwainoenda, sezvo zvichigona kukunetsa iwe nemhuka yako. Nokuti:
Zvakanakisa kuwana a nzvimbo ine rugare, kwaunogona kuita weti chinyararire. Nzvimbo iyi haingofanire kunge iri kure nekupfuura kwevanhu uye nedzimwe mhuka, asiwo kubva pakudya kwavo, zvekunwa kwavo nemubhedha wavo.
Unogona isa tireyi kana chimwe chinhu chakafanana nekusimbisa kusapinda kwemvura kwepadhi base (dzimwe nguva havagone kutora zvese) uye nekudaro kudzivirira kubva pakusvibisa pasi.
kunyange ukaenda kushandura underpad mushure mekushandisa kwega kwega, edza kugara uchichengeta nzvimbo imwe chete yaunoisa kuitira kuti usatsausa imbwa uye udzidzise kuti iyo kona ndeyei.
Maitiro ekudzidzisa mwana wako kushandisa underpad
Kudzidzisa imbwa yako kushandisa underpad kunosanganisira kushandisa akatevedzana manomano Ndine chokwadi chekuti hauzovawana zvisinganzwisisike uchifunga zvatinogara tichitaura nezvazvo kuMundoPerros: kusimbiswa kwakanaka kunobva pamubairo.
Chekutanga pane zvese, unofanirwa kuita kuti imbwa yako ijaire kunhuwa uye kutaridzika kwepasi pedhi. Kuti uite izvi, siya zvinobata pairi uye uuye nazvo padyo kuitira kuti zvijaire. Usambomumanikidza, rega azvionere ega.
Dzidza ku ziva kana imbwa yako iine chishuwo chekukweta kana kuita tsvina. Kana akafembedza zvakanyanya pasi, asingazorori uye otanga kumhanya uye kumira kamwe-kamwe, chiratidzo chekuti anoda kuenda kuchimbuzi. Itore uende nayo kune soaker kuitira kuti itange kuibatanidza nebasa iroro. Kana akatiza munzira, usamutsiura kana kuti angabatanidza nzvimbo iyoyo nechinhu chisina kunaka.
Mushure mekunge aita weti kana kumera, mupe kumubata, mupuruzire uye taura naye, saka iwe unozofungawo nezve underpad senzvimbo yakachengeteka uye yakanaka yekuita zvinhu zvako.
Pakupedzisira, usachinje padhi ipapo ipapo, saka imbwa inozorondedzera nzvimbo iyoyo senzvimbo yainozokoira kana kuita tsvina.
kupi kutenga mapepa embwa
Imbwa pads chigadzirwa icho, kutendeseka, hachigone kuwanikwa muchitoro chekona, kubvira iwe uchafanirwa kuenda kunzvimbo dzakakosha kana zvitoro zvedhipatimendi, kuwedzera kune akati wandei online zvitoro. Pakati penzvimbo dzinonyanya kuwanikwa tinowana:
Hofori vakaita Amazon Vane zvakasiyana siyana zvekuputira. Pasina kupokana, iyo ndiyo yakanakisa sarudzo pakati pemhando uye mutengo, nekuwedzera, nekutumira kwaunayo kumba (uyewo chimwe chinhu chakanyanya kunaka, sezvo iwe usingazozvitakure) munguva pfupi kwazvo.
Kune rumwe rutivi, mashopu anehunyanzvi seTiendaAnimal kana Kiwoko ivo vanewo akati wandei mamodheru. Pfungwa yakanaka yekuwana zvakanyanya kubva munzvimbo idzi ndeyekutenga chikafu pamwe nezvimwe zvinhu zvechipfuyo chako senge mapads, saka iwe unogashira zvese mukutakura kumwe uye unogona kutora mukana wezvinopihwa.
En chitoro kufanana neEl Corte Inglés vanewo mamodheru akati wandei, kunyangwe ari iwo anowanzo kuve nemutengo wepamusoro. Chinhu chakanaka ndechekuti, kuve chitoro chenyama, unogona kuzvitenga iwe pachako, izvo zvinogona kukubvisa mudambudziko.
Pakupedzisira, uye kana usiri kukurumidza, pinda AliExpress Ivo zvakare vane mashoma emhando dze underpads. Iwo akachipa zvakanyanya, kunyangwe chinhu chakaipa ndechekuti anogona kutora nguva yakareba kuti asvike.
Pasina mubvunzo, mapepa embwa anobatsira zvikuru panguva dzakasiyana-siyana kune imbwa, kunyanya kana dziri duku uye dzinofanira kudzidza kuenda kuimba yekugezera. Tiudze, imbwa yako yakamboshandisa pedhi here? Zvakatora nguva yakareba here kudzidza? Iwe unofarira underpads kana manapukeni?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Imbwa nyika » General Imbwa » Imbwa zvishongedzo » Iwo akanakisa underpads embwa: zvaari uye maitiro ekuita kuti imbwa yako ijairirwe kwavari